GamerOS: nyowani yekushandisa sisitimu yemavhidhiyo | Linux Vakapindwa muropa
Gamer OS iri nyowani yekuparadzirwa kweGNU / Linux iyo yakasvika zviri pamutemo kune mufaro wevazhinji vatambi uye vateveri veLinux. Iyi distro yakanyatsogadzirirwa kushandiswa kwemitambo yemavhidhiyo mairi, uye nokudaro kuunza chiitiko chakanakisa chevashandisi vanoda kuzvivaraidza neLinux distro, sekuparadzirwa kweValve's SteamOS uye nevamwe vakaita sezvavakaita panguva iyoyo.
Muchiitiko cheGamerOS iri zvichibva pane yakasimba uye inoshanduka Arch Linux. Asi vagadziri vayo vakaita kuti zvese zvive nyore kwazvo kwauri zvekuti unongofanira kunetsekana nekunakidzwa neako aunofarira mavhidhiyo emitambo mazita. Uye zvakare, GamerOS inounza mhinduro dzinonakidza kune mamwe matambudziko mune ino chikamu chevaraidzo yedhijitari.
Zvino, nekuburitswa kwe GamerOS vhezheni 18 Kune zvakare zvakakosha kuvandudza kweiyi distro, senge nyowani Linux kernel 5.6.15, mamwe akawanda akagadziridzwa mapakeji, senge emahara Mesa 20.0.7 madhiraivha, NVIDIA 440.82 madhiraivha, nyowani akagadziridzwa muimbi, retro mitambo uye emitambo mapakeji akadai RetroArch. 1.8.8 inosanganisirwa seyakajairwa, nezvimwe.
Ivo vakatora hanya kuchengetedza emulators ye Steam shamwari, webhu-based interface yekugadzirisa isiri-Steam software. Nemamwe mapuratifomu akadai seNeo Geo, GameCube, Arcade, uye yakareba etc.
Kana iwe uchida kuiswa kuri nyore, kwese Flatpak mapakeji vanoita kuti zvive nyore kwauri, uye iwe unogona gadza maapplication kubva kuFlathub zviri nyore mukubaya kamwe, senge Xonotic web browser, Firefox, Veloren, nezvimwe.
Network Hardware rutsigiro yakagadziridzwawo, kunyaradza gamepads seN64 kana Xbox One, nezvimwe. Huya, zvese zvaunoda kuti ugadzire nzvimbo huru yevaraidzo ine kushoma kwekuedza uye kunakidzwa kukuru kunogoneka! Uye kana iwe usiri kuda kugadzirisa izvo zvikamu, usatombo kunetseka, unogona kushandisa Etcher uye chengeta iyo mufananidzo kune USB kuti uishandise muRarama mode ...
Mamwe mashoko - GamerOS Yepamutemo Saiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » GamerOS: nyowani yekushandisa sisitimu yemavhidhiyo
Inonakidza, asi ndeapi madhesiki aunoshandisa, gnome, xfce, kde, mate, nezvimwe, nezvimwewo, nekuti ini handisi kuwana chero kupi tafura yaunoshandisa. Ndatenda. Kwaziso.
Pindura kune Zvakanyorwa
Zvinoenderana newebhusaiti yayo, inovhura yakananga Steam mune hombe pikicha modhi saka zvinoita sekunge isingashandise chero DE nenzira kwayo.
ricky ch akadaro
Pane mhosho yekupereta
«Zvino, nekutanga kweiyo GamerOS 18 vhezheni, iri kuuya»
Mundima yechitatu ...
kutaura kudiki :)
Pindura Ricky ch